Nahatezitra aoka izany an’ireo filoha ara-pivavahana ireo izany! Nihidy vazana noho ny fahasosorana izy. Nefa nitraka i Stefana, ary niteny hoe: ‘Indro! Hitako i Jesosy mitsangana eo ankavanan’Andriamanitra any an-danitra.’ Tamin’izay ireo lehilahy ireo dia nanampina ny sofiny tamin’ny tanany ary nirohotra namely an’i Stefana. Nohazoniny izy ary notarihiny ho any ivelan’ny tanàna.
Teto dia nesoriny ny kapaotin’izy ireo ary nasainy nambenan’i Saoly zatovo. Hitanao ve i Saoly? Avy eo dia nanomboka nitora-bato an’i Stefana ny olona sasany. Nandohalika i Stefana, araka ny azonao jerena eto, ary nivavaka tamin’Andriamanitra hoe: ‘Jehovah ô, aza manasazy azy noho izao zava-dratsy izao.’ Fantany fa nofitahin’ny filoha ara-pivavahana ny sasany tamin’izy ireo. Taorian’izay dia maty i Stefana.
Hizara Hizara Notoraham-bato i Stefana
my tant. 107